Cybersex စွဲ: ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု။ ဒေါ်ရသီဟိုင်ဒန်၊ LCSW (2016) - သင့် ဦး နှောက်သည်порноတွင်
By ဒေါ်ရသီ Hayden LCSW 04 / 28 / 16
သည်အခြားအလားအလာပြဿနာအပြုအမူတွေနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ (လောင်းကစားဝိုင်း, စျေးဝယ်, စားခြင်း, သောက်ခြင်းနှင့်တ္ထုများ အသုံးပြု. ) ကကောင်းမွန်စွာထူထောင်ပုံစံကိုအောက်ပါအင်တာနက်နည်းပညာအပေါ်အခြေခံပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အတော်လေးသစ်ကိုဘုံတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အခြားစိန်ခေါ်မှုဖန်တီးထားသည်။ အခြားအပြုအမူတွေနှင့်ဝသကဲ့သို့, "ဆိုက်ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ" လှုပ်ရှားမှုများ (စတာတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများပေးပို့ခြင်းညစ်ညမ်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ webcam တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အပြန်အလှန်အွန်လိုင်း sexcapades,) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူတွေကိုများ၏အများစုသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ကြောင်းပျော်စရာအာရုံပြံ့လှငျ့ဖြစ်ဤလှုပ်ရှားမှုများရှာဖွေတာ, ဒါကြောင့်ရံဖန်ရံခါလုပ်ပေး ပိုပြီးရင်းနှီးဆက်သွယ်မှုသကဲ့သို့စိတ်ကျေနပ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသူတွေကိုသျော cybersexual လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စွမ်းရည်စျေးသက်သာစွာနှင့်အမည်ဝှက်ဘဝတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏အခြားပုံစံများနှင့်ဆင်တူကြောင်းအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ ဒေါ်ရသီ Hayden နီးပါးနေသမျှကာလပတ်လုံး cybersexuality န်းကျင်ရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့များအတွက်လိင်ကိစ္စ compulsive အတူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ဤတွင်သူပါရာဒိုင်း၏တံခါးသော့ကိုဒိုင်းနမစ်များစွာကိုမီးမောင်းထိုးပြမယ့်ကိစ္စလေ့လာမှုတင်ဆက် ... ရစ်ချတ် Juman, PsyD
စတိဗ်သည်ငါနှင့်အတူသူ၏ပထမဆုံး session ကိုမှရောက်ရှိလာခဲ့သောအခါသူသိသိသာသာရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်နှင့်သိရပါဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးခေါင်းချကျင်းပနှင့်အတူ, သူသည်ငါနှင့်အတူမျက်လုံးချင်းအောင်နှင့်တစ်ချိန်ကကုလားထိုင်၌ထိုင်, အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အပြောများများဘာမှမချို့တဲ့ဘဲနေ၏။ သူကနောက်ဆုံးမှာသူသညျမိမိအလုပ်အပေါ်တစ်ဦးရှုတ်ချမှုများလက်ခံရရှိနှင့်သူ၏ဇနီးကွာရှင်းမှုအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့ကွောငျးခဲ့ကွောငျးဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါဘူး။ သူသည်ဤဆုံးရှုံးမှုန်းကျင်တစ်ဦးပြင်းထန်စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဖြစ်ပုံရသည်။
စတိဗ်သောသူသည်တစ်ချိန်က Over-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပေမယ်ကြောင့်အလုပ်အပေါ်လေးနက်မတော်တဆမှုများ, သူတ္ထုများသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်တစ်နေ့လပေါင်းများစွာကျော်, မိမိရမ္မက်တိုးလာ masturbate ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကထိုရမ္မက်အပေါ်ပြုမူဘူးလျှင်, တနေ့လုံး "horny" ရှိနေမယ်လို့နှင့်သူ၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်သို့မဟုတ်သူမသူ့ကိုပြောသောအခါသူ၏ဇနီးမှအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတော်ကိုအစဉ်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူသာအာရုံစိုခဲ့သည်။
စတိဗ်ခံစား၏စွမ်းအင်, စိတ်ဝင်စားမှု, ဒါမှမဟုတ်စွမ်းရည်မှု, ကျမဲ့နှင့်အချည်းနှီးသောခံစားရတယ်။ သူ့ကိုအသကျရှငျတဲ့အသိပေးသောတစ်ခုတည်းသောအရာဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံခဲ့သညျ။ သူ့ဇနီးကသူထွက်ခွာခဲ့ကြောင်းကြေငြာပြီးနောက်လအတွင်းအဘို့, သူသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်တွေ့ပိုပိုပြီး Imperial ဖြစ်လာခဲ့ကြသည် masturbate ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သူကသူ့ကို, အညစ်စိတ်တိုနှင့်မကျေနပ်မှုခံစားရစေပါလိမ့်မယ်အရာ, တနေ့လုံး "horny" ဆက်ရှိနေမယ်လို့ masturbate မပြုခဲ့ပါလျှင်သဘောပေါက်လာတယ်။
မကြာခင်မှာပဲအလုံအလောက်, စတိဗ်ကြောင်းညစ်ညမ်းသူ့ကို excite sexually ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအောင်မြင်ရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေသူ၏အသုံးပြုမှုကိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ သူဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်ဒါအမှန်တကယ်လိင်လုပ်ရပ်အဖြစ်နည်းတူဆွဲဆောင်မှုခဲ့ကြသည်လိင်သရုပ်ဆောင်ထွက်ရှေ့ပြေးသောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ထုံးတမ်းသို့သော့ခတ်ခံရသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိမိအစိတ်ပိုင်း-တရားစွဲဆိုမြင့်မားသော, chatting, စာသား, sexting နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-based အပြုအမူတွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း, dopamine-တိုးမြှင့်ရှာဖွေနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ တိုင်းအသစ်ကဗီဒီယို, ရုပ်ပုံ, ဂိမ်း, ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ဦးကူးယဉျနှင့်ထားချက်အရ, သူ့ရှာဖွေနေ, ရှာဖွေရှိသမျှတို့ကို ဖြတ်. စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ရှည်ကာလကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူ့ကိုအကူအညီပေးနေတာပို dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စတိဗ်သူကိုယ်ထိလက်ရောက်နှိုးဆော်ခြင်းသို့မဟုတ် orgasm မှလာမယ့်ဖြစ်လာစရာမလိုဘဲပြင်းထန်သော arousal feeling အဆုံးမဲ့နာရီပေါင်းများစွာနိုင်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ စုံလင်သောဗီဒီယို, ပုံသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များအတွက်မိမိအရှာဖွေမှု, ကင်း, သို့မဟုတ်အခြားစိတ်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်ဘိန်းဖြူအဖြစ်ထိရောက်စွာဘဝဦးစားပေးဆက်ဆံရေးနှင့်အသက်ကတိကဝတ်ထံမှဆဲပါနှင့်အာရုံပြံ့လှငျ့သူ့ကိုစောင့်လေ၏။ ကျဘာ, အကယ်စင်စစ်သူ့ရဲ့ "ရှေးခယျြမှု၏မူးယစ်ဆေး။ " ခဲ့
ကုသမှုတစ်နှစ်ပြီးနောက်, စတိဗ်လိင်စွဲအမည်မသိ (SAA) ၏အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုသွားသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ သူဟာထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်သူကမ်ဘာပျေါတှငျသာလူတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့တတ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်, ထိုအရပ်၌နှစ်သိမ့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအသက်တာ၌မတိုင်မီခဲ့ဘယ်တော့မှတစ်လမ်းအတွက်ထောက်ခံနှင့်တန်ဖိုးထားသလိုခံစားရတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, သူတစ်နေရာရာပိုင်ခံစားရတယ်။ သူဟာလူတွေစကားပြောနှင့်လူသူနှင့်အတူဝေမျှနိုင်နိုင်ဟုခံစားလာရတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူအစီရင်ခံတင်ပြသူသညျမိမိဖြစ်ရန်နှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်မိမိကိုမိမိနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
၏သင်တန်း, ဒီသည်သူ၏ကုသမှုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။
ဤအချိန်တွင်စတိဗ်အဓိကအောင်မြင်မှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မိမိအငြင်းပယ်ကျိုးသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကသူ့ကိုယ်သူဖို့နဲ့သူ့ကိုရန်နီးစပ်သူတို့အားပြုသမျှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်:
မိတ်ဆွေများနှင့်တဦးတည်းရဲ့အကျူးလွန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူမိသားစု / လျှော့ချရငျးနှီးထံမှအထီးကျန်မှုတွေ
တစ်ဦး duplicitous ဘဝအသကျရှငျကနေတိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှု
စိတ်ကူးယဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို“ ရှင်သန်” ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းရှိသောမိတ်ဖက်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု)
စတိဗ်နှစ်ခုအငယ်အစ်မတွေနဲ့အတူသားသမီးသုံးဦး၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမမွေးခင်ကသူ့မိခင်ငါးလကိုယ်ဝန်မှာကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ရသည်။ စတိဗ် "လှည့်ဖြား" -warm အဖြစ်သူ၏မိခင်ဖော်ပြထားနှင့်တဦးတည်းယခုအချိန်တွင်ဖိတ်ခေါ်နှင့်လာမည့်ငြင်းပယ်။ သူမသည်စတိဗ်ငျကိုးကှယျ။ သူကမျှမကမှားလုပ်နိုင်သူကိုသူမ၏မျက်စိများပန်းသီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမအတိအကျကိုစံချိန်စံညွှန်းများရှိခဲ့ပါတယ်, သူသည်သူမသူသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဆူညံခြင်းနှင့် boorish ကြီးနှင့်အဆုံးပေါ်နာရီသူ့အခန်းသူ့ကိုပေးပို့မယ်လို့မထီမဲ့မြင်နှငျ့အတူသူ့ကိုပြောပြမယ်လို့သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်သည့်အခါ။
စတိဗ်သူ့မိခင်ယောက်ျားဆီသို့ "ဆိုးရွားလှသောဥပဒေ" သဘောထားခဲ့ကြောင်းပြန်ပြောပြနှင့်မကြာခဏသူတို့ "တောသားရဲ" -loud, ကြမ်းတမ်းနှင့်လိင်ကိုသာစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ကြောင်းတိုင်ကြားလိမ့်မယ်။ သူမသည်မကြာခဏစတိဗ်များ၏ရှေ့မှောက်၌သုတ်သင်မယ်လို့, သူအိပ်ရာသို့သှားကွ၏မတိုင်မီဖွင့်အိပ်ခန်းတံခါးကိုထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သူကြောက်တဲ့အခါသူမကြာခဏသူ့မိဘနှင့်အတူအိပ်ရာသို့တက်လိမ့်မယ်။ သူ 12 နှစ်အရွယ်မှာသူ့ဖခင်ကမိသားစု left အထိဤဆက်ပြောသည်။ သူဟာသူမနှင့်အတူအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းခဲ့ပြန်ပြောပြနှင့်သူမတစ်ဦး flimsy nightgown ဝတ်ဆင်။ စတိဗ်ကသူအမြဲသူ့မိခင်အကြောင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သူကသမ္မာသတိရှိကြလော့အခါစတိဗ်ရဲ့အဖေတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါသောသူဖြစ်သော်လည်း, ဒါပေမယ့်သူကမသောက်ခဲ့သောအခါ, ထိုကျယ်သောအသံနှင့်ရန်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကိုအားဖြင့်စတိဗ်သူ့ဖခင်ခဲသမ္မာသတိရှိကြလော့ခဲ့သုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ထို့အပြင်သူမသောက်သောအခါသူသည်မိသားစုတစ်စုလုံးမှကြမ်းတမ်းခဲ့ပေမယ့်သူကစတိဗ်ဖို့အထူးသဖြင့်မတော်မတရားဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြိနျမှနျမှသူ Steve ရဲ့ကလေးမွေးဖွားစီစဉ်ထားမဟုတ်သလိုလိုချင်ခဲ့သည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းလိမ့်မယ်။ စတိဗ်သူ့ဖခင် "အစဉ်အမြဲငါ asshole ခဲ့သည်ကိုသိကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။ " အဲဒီလေ့လာတွေ့ရှိ
စတိဗ်ကိုးနှစ်အရွယ်တွင်စတိဗ်၏ဖခင်သည်မိသားစုမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ စတိဗ်ကစွန့်ပစ်ခံရသည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီးသူ၏ဖခင်သည်ဘယ်တော့မျှပြန်လာမည်မဟုတ်ဟုစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသည်ပြန်လာပြီးသူတို့အားလုံးသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်လိမ့်မည်ဟုလည်းသူစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ မိဘများ၏အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲခြင်းအတွက်လည်းသူသည်တာဝန်ရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
စတိဗ်ရဲ့ core ကိုထိခိုက်အတွေ့အကြုံကိုသူ့ကိုသူ၏အသာကယ်ဆယ်ရေးပေးသောလိင်ကနေအရှက်ကွဲခြင်းတက်တက်ကြွကြွ, ပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုသူ့မိဘများ၏မျှော်လင့်ချက်များမှတက်အသက်ရှင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မိမိမှတက်အသက်ရှင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ သူကဖြစ်စေငျကိုးကှယျသို့မဟုတ်ဒီစာအုပ်ကိုအထင်သေးရာတစ်မိသားစုနေထိုင်သည်, မိမိအရှက်ကွဲခြင်းအကြောင်း, မိမိအဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်, internalized ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူကသူ့စွဲလမ်းကနေသူ့မိသားစုနှင့်အလယ်တန်းရှက်ခြင်းနှင့်အသကျရှငျကနေမူလတန်းအရှက်ကွဲခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးအော်ဂဇင်ခဲ့အခါတိုင်းသူအရှက်ကွဲခြင်းနဲ့ Self-မုန်းတီးမှုနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဒါဟာတဦးတည်းရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အတွက်ဖြစ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ရှက်စရာပါပဲ။
စတိဗ်၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအထင်အမြင်သေးခြင်းကသူ့အဖေကသူ့အားအမေကမလိုချင်ဘူး၊ တန်ဖိုးမထားခဲ့သည့်သူ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သူ့အမေ၏အပြောအဆိုနှင့် narcissistic တုန့်ပြန်မှု၊ Harold ရဲ့မိခင်က Steve ကိုသူ့ဖခင်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားခြင်းအားဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအထီးကျန်လက္ခဏာကိုမွေးမြူခြင်းအားဖြင့် Steve ကိုသူ့ဖခင်လိုပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်အထွေထွေယောက်ျားများကိုတန်ဖိုးထားခြင်းအားဝေဖန်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး 12-အဆင့်အစီအစဉ်ကိုနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုလျှော့ချကူညီပေးခဲ့သည်, ငါသူ့ကိုကမ်းလှမ်းစာနာမှုနှင့်နားလည်မှုလညျးမိမိအရှက်ကွဲခြင်းသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီပေးခဲ့သည်။
ကုသမှု "ပထမဦးဆုံးအမိန့်" အပြောင်းအလဲနှင့် "ဒုတိယယူမှု" ပြောင်းလဲမှုသို့ခွဲခြားခဲ့သည်။ "ပထမဦးစွာယူမှု" ပြောင်းလဲမှုသည်သူ၏အပြုအမူတည်ငြိမ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူက Co-နေကြလို့ပဲစိတ်ရောဂါမမှန်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့တစ်စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်သည်လူကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆရာဝန်မစိတ်ဓါတ်များရောဂါအဘို့, Prozac တစ်ဦးအနိမ့်ထိုးအပေါ်သူ့ကိုထားပေမယ့်သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်ကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ရန်။
ကျနော်တို့ထို့နောက် Relapse ကာကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ရန်တစ်ဦးသိမှု-အပြုအမူစစ်အစိုးရကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်ထွက်ရှေ့ပြေးကြောင်း -internal နှင့်ပြင်ပဖြစ်ရပ်များ "ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း" ၏တစ်ဦးစီးရီးထွက်ရေးသားခဲ့သည်။ သူဝေး High-အန္တရာယ်အခြေအနေများမှဆက်နေရန်သင်ယူခဲ့တယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီခလုတ်ဘို့ကြံစည်ခဲ့ကြသည်။ မတရားသောနှင့်ရမ္မက်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နည်းလမ်းများပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ သူကအတွင်းရောက်သောအချက်ပြအဖြစ်မတရားသောနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူကပိုပြီးအလွယ်တကူသည်သူ၏အတွင်းစိတ်ပြည်နယ်များထက်ရိုးရိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူသူတို့နှင့်အတူတုံ့ပြန်စောင့် verbalize နိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့သူချုံးနှင့် relapses ကိုင်တွယ်စေခြင်းငှါနည်းလမ်းတွေဆွေးနွေးကြသည်။
ရိုးရှင်းတဲ့အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများအရပျ၌ထားခဲ့ကြသည်။ သူဟာပုံမှန်ဆဲလ်ဖုန်းသူ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာသည်မိသားစုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထားခဲ့ပါတယ်။ ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းဖယ်ရှားပစ်သော filter ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တင်ခံခဲ့ရသည်။ သူကတစ်မိသားစု-oriented အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုစာချုပ် installed ။ သူကကွန်ပျူတာကိုသုံးပါခဲ့သောအခါသူသည်မိမိအီးမေးလ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သော check လုပ်ထားသည့်အခါတိကျသောကြိမ်မှမိမိကိုမိမိကန့်သတ်။
အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုမကြာခဏထွက်သရုပ်ဆောင်တစ်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုနေကြသောကြောင့်, စတိဗ်နဲ့ကျွန်မထို့နောက်သူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားမှုမှအရှည်မှာသူ၏ဆကျဆံရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကုသမှုသူတို့ကိုမှသက်သာရာရစေရန်လိင်မသုံးဘဲအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသည်းခံတတ်ဖို့သင်ယူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ခိုင်မာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူထိရောက်စွာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ကြလော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိန်းချုပ်မှုမှမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်၏ပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး Relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံချက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသိမြင်မှုပျက်ယွင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ငြင်းခုံပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ လိင်စွဲအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုနှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့, သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုသိမြင်မှုပျက်ယွင်းအများကြီးရှိသည်။ ငါသူသည်မိမိအခဲ့ကြသည်ထင်သောအရာကိုရေးချဖို့, ပြီးတော့လာမယ့်သူတို့ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာသူအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ပဲပိုလက်တွေ့အတွေးကိုချရေးဖို့စတိဗ်မေးတယ်။
စတိဗ်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အအထီးကျန်ခဲ့သောကြောင့်, ကျနော်တို့အခြေခံဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဆိုထားပါသည်အတွက်သင်တန်းယူသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဤအအလုပ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးသူ့ကိုလူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုသက်သာခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကုသမှုသို့စတိဗ် propelled သောအရာတစျခုမှာကွာရှင်း၏မိန်းမသည်သူ၏မယားရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကသူ၏စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏နှစ်ကြာဖရိုဖရဲခဲ့ပေမယ့်သူနေဆဲသူမ၏ချစ်ပြီးအရမ်းသူမ၏သူ၏အသက်တာ၌ဖြစ်ချင်တယ်။ Sara, သူမ၏စိတျအပိုငျးအဘို့, စတိဗ်ရဲ့အမူအကျင့်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းသို့ကိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိမိအသူမ၏အရေးမကြီးခြင်းနှင့်လစျြလြူရှု, လျစ်လျူရှု, အထီးကျန်ခံစားရလုပ် "deviant" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျမြေအောက်ခန်းထဲမှာအချိန်ထိုကဲ့သို့ကြီးမားသောပမာဏသုံးစွဲဘဲလျက်။ သူမ၏ Self-လေးစားမှုသူမ၏ခင်ပွန်းကသူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကိုနဲ့စိတ်ကူးယဉ်သူတစ်ဦး၏ကုမ္ပဏီတွင်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏ရှေ့၌သူ၏အချိန်ဖြုန်းဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း သိ. ခံစားခဲ့ရသည်။
Self-လေးစားမှု၏ပျက်စီးမှုများ, နာကျင်, သစ္စာဖောက်များနှင့်အရှုံးများ၏ပေါင်းစပ်အခြားသောသူနှင့်အတူတစ်ဦးကိစ္စရှိသည်ဖို့စတင် Sara များအတွက်ဇာတ်စင်ထားကြ၏။ သူမ၏စိတ်ရင်းသူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-တန်ဖိုးထားတက်ကမ်းရန်နှင့်သူမ၏သစ္စာဖောက်ပြီးအဘို့အစတိဗ်အပေါ်လက်စားချေကိုဖျက်ဆီးဖို့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ သူမပါသေးစတိဗ်မှကျိန် ဆို. ပူဇော်ခံစားခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Sara သို့သော်အလွန်ရှည်လျားများအတွက်ကိစ္စများတွင်ဆက်လက်ခဲ့ပါဘူး။
စတိဗ်ရဲ့သရုပ်ဆောင်ထဲကစုံတွဲရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်တစ်ဦး deleterious အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Sara, သူ့စိတ်ကူးယဉ်အမျိုးသမီးတွေကိုဖို့ "တက်တိုင်းတာ" မခံစား, သူ့ကိုယ်သူအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ပိုပြီးမကြာခဏသူမတစ်ချိန်ကလုပ်ခဲ့တယ်ထက် lovemaking အစပျိုးလုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သူမစတိဗ်ချင်ပါတယ်ထင်ကြောင်း, sexy အဝတ်အစားဝတ်ဆင်။ အခြို့သောအခါသမယတွင်, Sara သူမကသူ့ကိုစိတ်တော်မယ်လို့ထင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရွံမုန်းတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ထိုမှာကြည့်ရှုရန် "လိုအပ်" မသူ့ကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့သူမတတျနိုငျသအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ် "အခြားမိန်းမတို့သည်။ "
အဘယ်သူမျှမသေတတ်သောလူသားအစဉ်အဆက်သူကယ့်ကိုလိင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့နည်းနည်းခဲ့ကြောင်းထွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အခါလိင်စှဲလမျးသူသို့ဝင်သောသော "ခေါ်ဆောင်သွားမီးခိုးမြူ" ဖွစျသညျ့ dopamine-တိုးမြှင့်အလွန်နှိုးဆော်ခြင်းပြည်နယ်အထိအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြောင်းအဘယျသို့က Sara နားမလည်ခဲ့ တကယ့်မိန်းမနှင့်။ တစ်ဦးကအစစ်အမှန်ဘဝလူတစ်ဦးတစ်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ သူမလည်းသူမစတိဗ်ရဲ့အခွအေနအေကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာကနေသူအစဉ်အဆက်သူမ၏တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမတိုင်မီသူကောင်းစွာသူနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများသယ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်သောအခွအေနေအဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်, ကျင်းပကြောင်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
ကုသမှုမှာတော့ Sara ကအပြုအမူဝိုင်းရံသောမုသာစကားနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များအဖြစ်တာအဖြစ်သူမ၏ထိခိုက်စေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းလက်ဆင့်ကမ်း။ ဒါဟာသူမခွင့်လွှတ်နိုင်ပါလျှင်သူမမသိခဲ့ပါကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအစဉ်အဆက်ကိုထပ်သူ့ကိုယုံနိုင်သံသယ။
နှစ်ပေါင်းအဘို့, စတိဗ်သူမကတစ်ခုခုမသင်္ကာသည့်အခါသူမက "အရူး" ခဲ့သူမ၏ပြောပြလိမ့်မယ်။ သူမကထိုပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်သူမကမထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲလကျခံဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, Sara, သူမ၏မတိုင်မီဤမျှလောက်များစွာသောမိန်းမကဲ့သို့သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် "ထောက်လှမ်းရေး" အကြောင်းကိုစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်လာခဲ့သည်; အကြိမ်ကြိမ်သူထွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဆိုပါကကြည့်ဖို့စသည်တို့ကိုကွန်ပျူတာ hard drives တွေကို, စမတ်ဖုန်း, စာသားများ, ဗီဒီယိုများ, webcam, အီးမေးလ်များ, စစ်ဆေးနေ။ သူမသည်သူမပြုသည့်အခါသူမကအရူးခံစားခဲ့ရကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမကအာဏာမဲ့ခံစားခဲ့ရရာကျော်အခွအေနပိုပြီးထိန်းချုပ်ရယူဖို့ကြိုးစားမှဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Sara က S-Anon သူမကသူမ၏ထောက်ခံမှုနှင့်စာနာပေးနိုငျခဲ့ကွသောမိန်းမတို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှိရာလိင်စွဲ၏မိတ်ဖက်များအတွက် 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်ရန်စတင်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမသည်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးစုံတွဲများကုထုံးများကိုဆက်လက်နေချိန်မှာငါမှသူမ၏ရည်ညွှန်းတဲ့ကုထုံးတွေနဲ့ကုသမှုစတင်ခဲ့သည်။
ကုသမှုစတင်ပြီးနောက်တစ်နှစ်, စတိဗ်သူကုသမှုရပ်စဲကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ငါသည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ရာအကြောင်းပြောဆိုရန်သူ့ကိုအားပေးခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တူးဖော်ရေးငါကိုယ်တော်တိုင်၏ဒီတော့သေချာခဲ့ပြီးမှ "မအောင်မြင်ခဲ့" ရှိခြင်းဘို့သူ့ကိုစစ်ကြောတော်မူခြင်းနှင့်အရှက်မယ်လို့ကသူ့စိတ်ကူးယဉ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်အလုပ်ကဒီစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် grandiosity နေသူ့ကျဆုံးခြင်းနှင့်အကူအညီတောင်းသည်သူ၏လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. စတိဗ်ရဲ့အရှက်ကွဲခြင်း, အကြှနျုပျကိုသူ၏ငြူစူခြင်းနှင့်မကျေနပ်မှုများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်သူ၏မိဘများနှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုသိသိသာသာကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများတဲ့အရေအတွက်ကများအကြားဆက်ဆံရေးကိုညွှန်ပြ။ လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဤအမှုအရာဆွေးနွေးရန်စတိဗ်ရဲ့စွမ်းရည်လျော့နည်းအခုသူကသူ့အတွင်းစိတ်ဘဝဖြစ်ကိုသိသောရှုပ်ထွေးထဲကသူ့ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးတည်ငြိမ်ပြီးတည်ငြိမ်ဆရာအဖြစ်နိုငျကငျြ့နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ကြှနျုပျကိုမွငျနိုငျခဲ့သညျ။
ကုသမှုတိုးတက်အဖြစ်, စတိဗ်သူတို့သူ့ကိုကျေနပ်အောင်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောချိတ်ဆက်မှုအတွက်သည်သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမဟုတ်ဘူးကတည်းကထိုအစိတ်ကူးယဉ်-based ယာယီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံသူကယ့်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ရာမသဘောပေါက်လာတယ်။
ထို့နောက်ကုသမှုသည်သူ၏မိဘများနှင့်ဆက်သွယ်မှုမှရရှိသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုဖြေရှင်းရန်အလှည့်ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏သုခချမ်းသာကိုထိခိုက်စေသည့်ကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်သူမွေးဖွားခဲ့သောသတင်းစကားများကိုကျွန်ုပ်တို့စေ့စေ့ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ယင်းတို့ထဲမှအချို့မှာ -
ကျွန်တော်သူကိုလက်ခံရရှိအရေးကြီးဆုံးချို့တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများတည်ရှိပြီးနောက်သူသည်ဤမက်ဆေ့ခ်ျကနေရလဒ်ကြောင့်သူ၏အသက်တာအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကတဆင့်သွား၏။ လူကြီးအဖြစ်သူသတိရှိရှိသည်သူ၏ Self-တန်ဖိုးရှိရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျအသစ်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ "ချေးအရှက်ကွဲခြင်း။ " ပြန်လာသောသူ့မိဘနှစ်ယောက်စလုံးသူတို့စတိဗ်ကူးပေးသောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အနိမ့် Self-လေးစားမှု, အရှက်ကွဲ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူအသက်ဝိညာဉ်ကိုဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ စတိဗ်အရှက်ကွဲသူ့ကိုမစပ်ဆိုင်ကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်. , သူကသူ့မိဘပိုင်သူကပိုင်မှဘယ်မှာသူ့မိဘတွေကိုပြန်အပ်ပေးတော်မူ၏။
စတိဗ်သူ့မိသားစုကိုအပြစ်လွှတ်ခြင်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူ grappled ။ မကျေနပ်မှုတှငျနထေိုငျဘဝလည်းနာကျင်ကြောင့်သူဟာကိုယ်အဘို့ပြုလေ၏တစ်ခုခုအဖြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ သူကသူတို့ကိုသွားရောက်သွားသောအခါဤသည်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလည်ပတ်မှုတိုတောင်းခဲ့ကြသူတို့နှင့်အတူမိမိအ interaction ကသာယာတဲ့နည်းအမျက်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ သူကမိဘကသူ့ကိုသူတို့တတျနိုငျသကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့သူ fallible လူသားတွေအဖြစ်သူတို့ကိုလက်ခံခဲ့လေသည်။
ကုသမှုစတင်ခဲ့သောသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှ, စတိဗ်ကသူ၏အသက်တာ၌ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ခဲ့ရသည်။ သူကုထုံးလာရန်ဆက်လက်သူလိင်စွဲအမည်မသိအတွက်တက်ကြွစွာအစီအစဉ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူကထောက်ခံမိတ်ဆွေကွန်ယက်ရှိခဲ့နှင့်အသစ်ဝါသနာတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူကမှန်မှန်ကျင့်သုံး။ သူနဲ့က Sara ကောင်းစွာလုပ်နေခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာသူမှလိုက်နာလိမ့်မယ်လို့အပြုအမူတွေများစာရင်းကိုပါဝင်သည်သော "ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းစာချုပ်" ကိုလိုက်နာ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတစ်ဖန်ပြန်လည်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သူမ၏ပြသခဲ့သည်။
စတိဗ်နေဆဲမတရားသောတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြပေမယ့်သူကသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အရာနှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှုဝယ်ယူခဲ့သည်။ အနည်းငယ်အခါသမယတွင်သူသည်သက်တမ်းလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီ။ သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုမိခဲ့ relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးအလုပျသူတစ်ဦး Full-လွ relapse သို့မရွှေ့ခဲ့ဘူးသူတစ်ဦးချုံးသူသည်မိမိအ relapse ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုဆိုလိုကြောင်းသိနားလည်ကြ၏။
မိမိအ Self-လေးစားမှုမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သူမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံမုန်းတဲ့, အရှက်ကွဲတဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်၌အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ မိမိအ 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်တွင်မိမိအပါဝင်ပတ်သက်မှုမှတဆင့်သူတစ်ဦးဂရုစိုက်တတ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အခြားသူများကူညီပေးနေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ကုထုံး၏အကူအညီနှင့်အတူ, ဘဝအပေါ်သူ၏အမြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူကလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, အတှေးအနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ "လိုအပ်-ကျေနပ်အရာဝတ္ထု" အဖြစ်အခြားသူများကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတစ်ဦးနု, narcissistic လူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးကောင်းနားထောင်ဖြစ်ဖို့ရန်နှင့်စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုဖြစ်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သူ, အထူးသဖြင့်အပါအဝင်နှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်နီးစပ်သော, ထောက်ခံမိတ်ဆွေကွန်ယက်ရှိခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
စုံတွဲများအကြံပေးခြင်းအားဖြင့်, ခါးသီးမှုနှင့်အမျက်ဒေါသဟာသူတို့ရဲ့သီးခြားကုထုံးမှတဆင့်သူတို့ကုသမှုထဲမှာ "မဟာမိတ်" ဖြစ်တတ်လာတယ်, သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကထားခဲ့သညျ။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အကျပ်အတည်းများမှတဆင့်သွားပြီပြီးမှ, သူတို့တစ်တွေပိုမိုနက်ရှိုင်း, ချမ်းသာနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးခံစားကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
မေတ္တာနှင့်လိင်ကဲ့သို့သောသူတို့လက်တွေ့အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်စိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ကြောင်း, လူ့အခွအေနေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်။ ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုလူ့လိင်အပေါ်ရှိခြင်းသောဆိုးကျိုးများနှင့်အတူအချို့သောကျွမ်းရှိသည်, ထိုလက်တွေ့လူဦးရေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူကိုသူတို့အား, အထူးသဖြင့်လူငယ်များ behooves ။
ဒေါ်ရသီ Hayden, LCSW, မန်ဟက်တန်အတွက်ပုဂ္ဂလိကအလေ့အကျင့်တစ်ခု psychotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ 20 နှစ်ပေါင်းသူမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ကုသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်လိင်စွဲလမ်းအကြောင်းကို 40 ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သည် (www.sextreatment.com) နှင့်စာအုပ် "- ကုထုံးတစ်ခုလမ်းညွှန်စုစုပေါင်းလိင်စွဲလမ်း Recovery ကို" ရေးသားထားသည်။ မစ္စ Hayden လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကျဘာ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. HBO, "20 / 20" နှင့် Anderson က "360" ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။